Abercrombie Syndrome (Abercrombies ရောဂါစု) : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar | ရေးသားသူ Dr.Thant Zin
သွားပိုးဝင်ရာမှ ကိုယ်ခန္ဓာအခြားနေရာများသို့ ပျံ့နှံ့ခြင်း
သွားကိုက်တာကို သေချာစွာ မကုသဘဲထားရင် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်ဆိုးရင် ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့တခြားနေရာတွေကို ပျံ့နှံ့သွားနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, သွား နှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး နိုဝင်ဘာ 12, 2020 .2mins read
လိပ်ခေါင်းဆိုတာဟာ စအိုမှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေ ဖောင်းရာကနေ စဖြစ်တာပါ။ သွေးပြန်ကြောများရဲ့ တည်နေရာကို မူတည်ပြီး အပြင်လိပ်းနဲ့ အတွင်းလိပ်ဆိုပြီး ရှိပါတယ်။
ကျန်းမာရေးအားလုံး, ခွဲစိတ်ကုသမှုများ နိုဝင်ဘာ 4, 2020 .2mins read
ဘက်တီးရီးယား၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတမျိုးမျိုးဟာ တံတွေးဂလင်း ဒါမှမဟုတ် တံတွေးထွက်ရာလမ်းကြောင်းအတွင်းကို ဝင်ရောက်ကူးစက်ခြင်းကို တံတွေးဂလင်းပိုးဝင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
ကျန်းမာစွာနေထိုင်ခြင်း, သွား နှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး အောက်တိုဘာ 23, 2020 .2mins read
ဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့် အထက်လန်အောက်လျှောဖြစ်ခြင်း (bacterial gastroenteritis)
အစာအိမ်နံရံနဲ့ အူလမ်းကြောင်းမှာ ရောင်ရမ်းပြီး အဆက်မပြတ်အန်ခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ခြင်းတွေကြောင့် အထက်လန်အောက်လျှောလို့ ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း ကျန်းမာရေး, အထက်လန်အောက်လျှောခြင်း အောက်တိုဘာ 20, 2020 .2mins read
စိတ်ပူပင်စရာ ကြောင့် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဝေဒနာများ
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 10, 2021 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် နိုဝင်ဘာ 24, 2020 .2mins read